ISharks izodlala noma iphundlekile
USANELE Nohamba nozakwabo kwiCell C Sharks ababhekene nenselelo yokudlala kwiCarling Currie Cup yize kuvalwe ngehlahla eqenjini labo ngecoronavirus Isithombe: GALLO IMAGES
Mike Greenaway | November 24, 2020
AKUKHO ukwenza ngokunye eqenjini leCell C Sharks ngaphandle kokuqhubeka nemidlalo yeCarling Currie Cup phezu kokuthi kunabadlali bayo abatholwe beneCovid-19.
ISharks ilungiselela ukudlala nePumas ngoLwesihlanu eJonsson Kings Park, eThekwini.
Bawu-10 abadlali beSharks abangekho ngoba kutholwe ukuthi banegciwane iCorona kwase kudingeka ukuthi bagonqe ngoba kade besondelene nabatholakale behaqakile.
Isikhulu esiphezulu seqembu, u-Eduard Coetzee, sithe ngeke bawumise umdlalo.
Ngesonto eledlule iSharks yayizokwamukela iStormers emzuliswaneni wokugcina weSuper Rugby Unlocked kodwa umdlalo wangabe usabakhona ngenxa yokuqubuka kweCorona ekhempini yayo. Kwabe sekunqunywa ukuthi umdlalo uthathwe njengodlalwe ngokulingana, amaqembu womabili anikezwa amaphuzu amabili.
Ukungabikhona kwawo kwasho ukuthi iSharks neStormers yaphuthwa yithuba lokuwina nobekuzokwenza ingene kwiCurrie Cup namaphuzu angcono.
Manje baqede iSuper Rugby Unlocked bebambene ngamaphuzu awu-19, ngemuva ngamane kompetha iBulls esizoqala iCurrie Cup ngamaphuzu angcono. Umthetho walo nyaka uthi amaqembu azodlala kwiCurrie Cup azongena emqhudelwaneni namaphuzu awathole kwiSuper Rugby.
UCoetzee uthe nakanjani kumele bangene enkundleni noma ngabe kukhona abadlali abangekho.
“Sisihlolile isikwati ngeSonto. Abekho abasha abatholwe behaqekile kodwa sishoda ngabadlali abawu-10 kusukela ngesonto eledlule. Uzobona uma isikwati sesimenyezelwa ukuthi sishayeke kangakanani endaweni yama-prop, nama-loose foward kodwa kumele siqhamuke nohlelo ukuze siqhubeke. Kumele sidlale. Ngeke sikwazi ukuthi sibuye silahlekelwe amanye amaphuzu kwi-log,” kusho uCoetzee.
Ngale kokubukela phansi izivakashi, ngokwezinga iSharks ephelele inethuba elihle lokuwunqoba umdlalo wayo wasekhaya uma idlala nePumas, ngakho ukuhoxisa umdlalo bese bethatha amaphuzu amabili esikhundleni samahlanu abangawathola kungababuyisela emuva.
UCoetzee uthe iqembu lonke seliphilisa kwabantu abasasesigabeni sesine somvalelandlini ngenxa yokuthi ngaphandle kokuphuma beyoziqeqesha kumele bazivalele emakhaya.